Mushure mekuvandudza iyo HomePod kuenda ku14.5 vamwe vashandisi vari kunetseka kuwana Apple Music | Ndinobva mac
Ignacio Sala | 07/05/2021 14:00 | Noticias, Apple zvigadzirwa
Svondo rapfuura Apple yakaburitsa vhezheni yekupedzisira yeIOS 14.5 uye iPad 14.5 vhezheni iyo, pakupedzisira, inotibvumidza kiinura yako iPhone neako Apple Watch pachiuno chako (basa raigona kunge rakasvika mwedzi yakati wandei yapfuura) pamusoro pekuunza sisitimu nyowani inobvunza mushandisi kana vachida kunyorera dhata yavo.
Pamwe pamwe neichi chiitiko, Apple yakaburitsa vhezheni 14.5 yeiyo HomePod zvakadaro, zvinoita sekunge ichi chigadziriso haisi kushanda sezvainofanirwa kuita sezvo vamwe vashandisi vachisimbisa kuti havagone kushandisa rairo Hei Siri kukumbira rwiyo, playlist… muApple Music.
Shanduro 14.5 yeiyo HomePod yakanangana nekugadzirisa akasiyana mabugs, pasina kuunza chero nyowani mashandiro. Muvhuro wekupedzisira, Apple yakaburitsa chigadziriso chitsva cheIOS 14.5.1 ne "bug fixes uye performance performance" iyo inogadzirisa iyo nyaya inoratidza iyo Yekutevera Transparency chinja mune yekugadzirisa sarudzo yakacheneswa kunze kune dzimwe nyika.
@AppleSupport Chii chiri kuitika na #HomePod kusakwanisa kuwana mimhanzi pa #AppleMusic?
"Hei Siri, tamba Elvis Presley"
"Handina kuwana Elvis Presley paApple Music"
"Hei Siri, tamba maBeatles"
"Handina kuwana maBeatles paApple Music"
- Wati "Kutamba"? (@didYouSayDance) Dai 5, 2021
Pamwe neiyi vhezheni, Apple yakaburitsa vhezheni 14.5.1 yesoftware yeiyo HomePod, inogadziridza iyo isina kugadzirisa dambudziko futi. Vamwe vashandisi vanoti nekuisa fekitori iyo HomePod, Siri yanzwisisa zvakare zvikumbiro zvekutamba kuburikidza neApple Music. Sezvo ini ndataura, dambudziko iri harina kunyanya kupararira, asi zviripo. Kana iwe uri kusangana nekutadza kushanda nePambaPod, zvinoita sekunge sarudzo ndeyekuidzorera kubva pakutanga.
Pane here kunetseka mukuita paApple Music Service, handiti? Hazvishande rinenge mazuva maviri apfuura muPambaPod pakanzi "hey Siri ... ridza mumhanzi"
- cymmer (@cymmer) Dai 5, 2021
Dambudziko iri iri kungokanganisa iyo HomePod, kwete iyo HomePod mini. Muvhiki rese rapfuura uye kutanga kwesvondo rino, mamwe masevhisi eApple akaita seTunes neApple Music vakasangana nematambudziko, matambudziko angangodaro akonzera kutadza uku. Zvinotarisirwa zvakare kuti panguva yekumisikidza izvi hazvina kuitwa nemazvo kubvira pakudzoreredza chishandiso, chinoshanda zvakare sezvazvaive pakutanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Mushure mekuvandudza iyo HomePod kuenda ku14.5 vamwe vashandisi vari kunetseka kuwana Apple Music
Kunze kwekukanganisa 14.5.1 hakuoneki kwePambaPod.
Izvo zvinoitika neangu iPhone 12 pro max uye carplay